BlackBerry Leap: ukubuyekeza nokuqhathanisa — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Izihloko mayelana BlackBerry → Izibuyekezo futhi Ukuqhathanisa Smartphones BlackBerry →
BlackBerry Leap: ukubuyekeza nokuqhathanisa
Namuhla sinikeza wena ukubheka uhlobo "hybrid» — BlackBerry Leap — smartphone Z3 design kanye nokusebenza Z10 / Z30.
Inkampani BlackBerry, okuyinto sincintisana brand eziningana ehola Smartphones, esanda kukhululwa umfuziselo Leap. E-Asia, kubiza cishe u- $ 330 (ruble 18,000). Leap — uthinte ngokugcwele idivayisi, kanye ne Z10 kanye Z30. Nazi izici zayo:
Design kanye nendawo izakhi obusebenzayo
BlackBerry Leap — ezimangelengele smartphone-quality umhlangano, ne izilinganiso 144 mm x 72 mm x 9,50 mm enesisindo 170 grams. (Ukuze uqhathanise, Z3 kancane ezincane. 164 amagremu kanye 140 mm ukuphakama). Leap On the emuva ikhamera itholakala kanye nabezindaba isikhulumi (abanye bathi ukuthi drowns umsindo, uma ubeka ifoni). Ngaphambili has a screen esikhulu futhi isikhulumi idivayisi izwi. izinkinobho isimungulu inkinobho yevolumu zitholakala ngasohlangothini lwesokunene odongeni, futhi idivayisi — amandla inkinobho phezulu. Top ubuye a jack ngehedfoni 3.5 mm ububanzi. USB port (Micro) itholakala ezansi. Uhlangothi kwesokunxele kunesithembiso exhumanisayo iSIM khadi nememori khadi (SIM khadi Micro-Sim kanye MicroSD format ifomathi evamile imemori khadi).
By uhlobo Leap kancane ezahlukene kusukela Z3: front ingxenye bebonke alihlukile, ngemuva efanayo cover usizo kusukela plastic kanzima, indawo efanayo isikhulumi kanye logo. Ukwahlukana khona ikhamera (okwamanje Leap Faka ecwebezelayo okudweba nombhalo othi 8 MP).
Futhi, iqiniso ezithakazelisayo wukuthi ilungiselelo izakhi ukusebenza the Leap ohlangothini esikhundleni sayo kwafakwa uHlelo okuphambene (at Z3 slot SIM khadi / imemori khadi, kunalokho, ilungelo nezinkinobho kwesokunxele —). Kungani Akucacile yini ngokugcwele.
Nazi ezinye izithombe more Leap:
Ngokungafani nama-Z3, okuyinto kudedelwa kuphela black, Leap owethulwe kuzo zombili imibala eyisisekelo: black and white.
Screen, ikhamera bese umsindo
Leap sikrini wokubuka angle okwanele kanye yamazinga aphezulu okungabi: 720 × 1280 pixel ukulungiswa kanye ngokucacile 294 PPI. Lezi zibalo kucishe izici kwesikrini Z30, okuyinto yaziwa ikhwalithi yesithombe. Z3 Jakarta ngokuyisisekelo leyo ndawo ilahlekelwa Leap: ngesilinganiso esifanayo 5 amasentimitha it has isinqumo pixels 540 × 960 kuphela, futhi ngokucacile 220 PPI.
Ikhamera main e Leap 8MP, njengoba sibona umbhalo, phambi — 2 MP. Kuqhathaniswa Z3, lapho ikhamera kuveza isibhamu ngempela kahle Leap ikhamera ehloniphekile, izithombe uphume ezingeni Z10 noma Z30. Ikhamera BlackBerry Leap has autofocus, LED-flash, kanye eyaziwa umsebenzi Time Shift (ikhono lokukhetha shot best ochungechungeni). Isithombe kungase kube kungabukeki kahle ekukhanyeni low, okuyinto, isimiso, kuyinsakavukela; ikhamera Daylight uthatha best. Ngaphambili ikhamera impela okuhle, ngempela kahle ngoba video kanye selfie-isibhamu, kanti futhi kangcono ukwedlula Z3 (2 MP vs. 1.1).
Kepha umsindo, kukhona kuphela idatha subjective: umsindo of ifoni okuhle phambi eliphezulu headphones.
Idivayisi ifakwe 1.5GHz ombaxambili-core Qualcomm Snapdragon S4 nge 2 GB RAM. Le nhlanganisela kunikeza ezingeni ukusebenza Z10, Z3 izibalo lapha ngezansi. Leap umsebenzi ezahlukene fast, ukubekezela isithwathwa kakhulu futhi multi-tasking is hhayi "hang" uma ushintsha izicelo.
Isitoreji ifayela Smart 16 liqukethe GB memory yangaphakathi ezingasetshenziswa lenyuke ngamaphesenti enye 128 GB usebenzisa imemori khadi.
I-smartphone impela kufanelekile yokudlala, "kuphazamisa" ngikwenza kuphela lapho afune izinto ngenkani kwabanye udlala imithombo.
Uhlelo yokusebenza kanye nezicelo
Leap, bebonke, lihlukile operating system namanye amadivayisi 10 kuhlanganisa induduzo efanayo futhi nakalula. Yena usebenza on the last, kuze kube manje, firmware version 10.3.1. Hambayo iyahambisana izicelo third-party (Android, njll).
Kuyaphawuleka ukuthi cingo lusekela ama Imihlangano BlackBerry — isicelo ivumela isiqophi noma ingqungquthela audio ababambiqhaza 25 kusuka ohlwini loxhumana nabo. A isixazululo omuhle ibhizinisi.
BlackBerry Blend usebenza lapha mode efanayo, besebenzisa kuwusizo ukuxoxa naye ukubuka amafayela futhi basebenze nefoni yakho ngokusebenzisa ikhompyutha yakho.
Ukushukuma komzimba kanye nemisebenzi ethize ukuze BlackBerry 10 abakhona. Smartphone isikrini sivuleka uma uyithatha, imodi ubuthongo icushiwe, uma ubeka ohlangothini screen phansi, imodi ucingo buthule iqala lapho uvula — lutho olusha.
BlackBerry Leap siphinde sihlinzekele nezinhlelo ezihlanganisa umsebenzi FM-radio, Nokho, akukhona ikhono ukurekhoda ukusakaza.
Ibhethri akuyona esikhiphekayo, umthamo we 2800 mah. Ngokusho kwemibiko esemthethweni, ifoni isebenza kuze kufike ezinsukwini ezingu-16 zesikhathi eceleni. Indlela — Empeleni akekho owaziyo, izivivinyo olunzulu sezenziwe.
Ukuze uqhathanise, namandla ngendlela efanayo Z30, futhi Z3 abe — kancane kancane 2500 mah.
I cingo lusekela ama-4G kanye Bluetooth, kodwa NFC Ukusekela at Leap cha.
Abanye bakholelwa ukuthi BlackBerry akhethiwe inqubomgomo amazwe impikiswano amadivaysi, futhi ayikwazi ancintisane "imidondoshiya" ngesimo, isibonelo, Android ne Windows. Kodwa akumelwe sikhohlwe ukuthi BlackBerry — Smartphones unique, izinzuzo zabo awukwazi ukuya off-ngezinga ukusebenza, futhi lula ukusebenza, ukuphepha kanye engenakuqhathaniswa nekghono. Kulokhu, Leap — idivayisi impela ehloniphekile uma ukhetha BlackBerry zokuthinta isikrini smartphone, sincoma ngesibindi ukuba banake kuso. It Akucaci ukuthi kungani le nkampani ikhiphe Z3 Jakarta, idivayisi ngokucacile ukulahlekelwa izici, kodwa ngentengo hhayi eliphansi.